တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့နျူကလီးယားစီမံအုပ်ချုပ်မှုအား ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဟု ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့နျူကလီးယားစီမံအုပ်ချုပ်မှုအား ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဟု ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် ဖူချင်းစီရင်စုရှိ ဖူကျန့် ဖူချင်း နျူကလီးယားစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နျူကလီးယား စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် ၎င်း၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် အဆိုပြုချက်များအား ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော နိုင်ငံများအားလုံးနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်သွားရန် အသင့်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ma Zhaoxu က ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် စသည့် နျူကလီးယားလက်နက် ငါးနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက နျူကလီးယားစစ်ပွဲအား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လက်နက်ကိုင်အားပြိုင်ပွဲများကို ရှောင်ရှားခြင်းဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက်အား ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတစ်ခုတွင် Ma က မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် ၊ နျူကလီးယားနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့စီမံအုပ်ချုပ်မှု အားကောင်းမှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ အဆိုပြုချက်၏ အရေးပါမှုကို Ma က မီဒီယာအား ပြောခဲ့သည်။
နျူကလီးယားစစ်ပွဲသည် မည်သူမျှ အနိုင်ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဘယ်သောအခါမှ တိုက်ခိုက်၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မည်သည့်နျူလက်နက်ကမျှ အချင်းချင်း သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို ပစ်မှတ်ထားရမည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားလျက် နျူကလီးယားလက်နက် ငါးနိုင်ငံက ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုထုတ်ပြန်ချက်သည် နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် နျူကလီးယားစစ်ပွဲများ ကာကွယ်လိုသော နိုင်ငံငါးနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဆန္ဒသဘောထားကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထားကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် နျူကလီးယား ပဋိပက္ခများ လျှော့ချခြင်း ဘုံသဘောထားကို ဖော်ပြထားကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကြီးသည် ရာစုနှစ်အတွင်း မမြင်နိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် COVID-19 သက်ရောက်မှုများက ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုလျက် နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာမြောက် လုံခြုံရေးနယ်ပယ်က အဓိက စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရင်ဆိုင်လျက်ရှိကြောင်း Ma က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်သည် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု မြှင့်တင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကနိုင်ငံများအကြား ယှဉ်ပြိုင်မှုအစား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အစားထိုးခြင်းသည် အလုံးစုံတည်ငြိမ်ရေးနှင့် မျှတသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သွင်ပြင်ဖြင့် အဓိကနိုင်ငံဆက်ဆံရေး တည်ထောင်ရန် အပြုသဘောအရေးပါမှုဖြစ်ကြောင်း Ma က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် “နျူကလီးယားစစ်ပွဲက အနိုင်ရမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဘယ်တော့မှ တိုက်ခိုက်၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်း” စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်ကို အမြဲတစေထောက်ခံကြောင်းနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်ရန် နိုင်ငံငါးနိုင်ငံက မြှင့်တင်ရာတွင် ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ် ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘယ်လိုနျူကလီးယား လက်နက်တွေကမှ အချင်းချင်း သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို ပစ်မှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထပ်လောင်းပြောကြားထားသည့် အကြောင်းအရာလည်း ပူးတွဲကြေညာချက်၌ ပါဝင်ကြောင်း Ma ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ငါးနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သလို နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေး သဘောတူစာချုပ် (NPT) အောက်ရှိ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသော နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ငါးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုလျက် ၎င်းတို့သည် နျူကလီးယားစစ်ပွဲကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ဘုံတာဝန်ယူမှုကို လက်ခံကြောင်း Ma က ပြောကြားခဲ့သည်။
“နိုင်ငံငါးနိုင်ငံအနေနဲ့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကို အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အားကောင်းရေးအတွက် စတင်အမှတ်သစ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဘုံလုံခြုံရေး တည်တံ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ခုခံကာကွယ်ရေးသဘောဆောင်သည့် နျူကလီးယားမဟာဗျူဟာကို အစဉ်အမြဲ ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံလုံခြုံရေး စောင့်ထိန်းကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အနည်းဆုံးအဆင့်တွင် နျူကလီးယားအင်အားကို အစဉ်တစိုက် ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိကြောင်း၊ “ဒီလို မိမိကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက် တည်ငြိမ်ရေးကို အရေးပါတဲ့ အထောက်အကူပြုမှုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Jan.4(Xinhua) — China will continue to contribute its wisdom and proposals to global nuclear governance, and is ready to carry out cooperation with all peace-loving countries, Chinese vice Foreign Minister Ma Zhaoxu said on Monday.
Ma made the remarks during an interview after the leaders of the five Nuclear-Weapon States, namely China, France, Russia, Britain and the United States on Monday issuedajoint statement on preventing nuclear war and avoiding arms races.
Ma told the media the significance of the joint statement, China’s efforts and China’s proposition on strengthening the global governance in the nuclear field.
This is the first time for leaders of the five Nuclear-Weapon States to issue suchajoint statement, which has demonstrated the political will of the five states to prevent nuclear wars, and given their common voice of maintaining global strategic stability and reducing the risk of nuclear conflicts, he added.
Noting that the world is undergoing changes unseen inacentury and the impact of COVID-19, Ma said the international strategic security field faces many major challenges.
The joint statement is conducive to enhancing mutual trust, said Ma, adding that replacing competition among major countries with coordination and cooperation is of positive significance to the building of major-country relations featuring overall stability and balanced development.
China has always been advocating the idea that “a nuclear war cannot be won and must never be fought,” and has been playingaleading role in promoting the five countries to take joint actions. Thanks to China’s efforts, the content of “reaffirming that none of our nuclear weapons are targeted at each other or at any other State” is included in the joint statement, according to Ma.
Noting that the five Nuclear-Weapon states are permanent members of the United Nations Security Council as well as legally recognized nuclear-weapon states under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Ma said they bearacommon responsibility to prevent nuclear war and safeguard world peace.
China has always maintainedanuclear strategy that is defensive in nature, pursuedapolicy of no-first-use of nuclear weapons, and maintained its nuclear force at the minimum level required for safeguarding national security. “This in itself is an important contribution to global strategic stability,” he said. ■
Aerial photo taken on Jan. 30, 2021 showsaview of Fujian Fuqing Nuclear Power Co., Ltd.,asubsidiary of the China National Nuclear Corporation (CNNC), in Fuqing, southeast China’s Fujian Province. China’s first nuclear power unit using Hualong One,adomestically-designed third-generation nuclear reactor, has entered commercial operation, said the CNNC Saturday. The No.5unit in Fuqing is generating electricity for sale afteraseven-day trial run. (Xinhua/Lin Shanchuan)